China Heavy Disc Harrow For Agricultural 1BJ ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
I-1BJX medium disk disc harrow ilungele ukuchoboza nokukhulula amabhlogo enhlabathi ngemuva kokutshalwa nokulungiswa komhlaba ngaphambi kokutshala. Ingakwazi ukuxuba inhlabathi nomanyolo ezweni elinyiwe futhi isuse iziphunzi zezitshalo. Umkhiqizo unesakhiwo esizwakalayo, ukuqina okuqinile, ukuqina, ukusebenza okulula, ukunakekelwa okulula, futhi kungagaya ngempumelelo futhi kuqhubekele enhlabathini ukwenza umhlaba ubushelelezi, lokhu kuhlangabezana nezidingo zezolimo ezinamandla.
Izinto zediski zingama-65MN, le nto inzima kakhulu, ngakho-ke kulula ukubola inhlabathi esepulazini.
Okumele kuqashelwe Ngokufakwa kweHarrow
1. Ngehabhu yediski eligcwele, kulungile ukulifaka kahle, kungakhathalekile ukuthi umthwalo uyafana yini; nge-disc harrow engafakwanga, ukuze wenze umthwalo kumfaniswano weqembu le-harrow, ama-notch wama-harrows aseduze kufanele adideke omunye nomunye.
2. Ukuze kugwenywe ukuthi isikhundla sokuthwala asikwazi ukufanisa ipuleti yokuxhasa yokuxhuma ifreyimu ye-rake ngesikhathi somhlangano jikelele, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi isikhundla sokuthwala ku-roller hala asilungile.
3.Ukuze wenze ipayipi Lesisemkhatsini kanye neharika lihlangane kahle, ukuphela okukhulu kwepayipi Lesisemkhathini kufanele kube seduze kwendawo ekhoneni engxenyeni ye-rake, futhi ukuphela okuncane kwepayipi Lesisemkhatsini kufanele kube seduze kwendawo engaphezulu ye-concave hala. Uma kukhona igebe lendawo phakathi kwezindawo zokuxhumana, akufanele libe ngaphezu kuka-0.6 mm.
4. Ekugcineni qinisa isikwele shaft nut ngokuphelele bese uyakhiya. Ukuthi i-shaft nut isqinisiwe noma cha inethonya elikhulu ekusebenzeni nasempilweni yeqembu le-harrow. Uma ikhululekile kancane, imbobo yangaphakathi yepuleti le-harrow izohamba maqondana nomphini ngamunye nowesikwele. Umgodi ongaphakathi oyisikwele wepuleti le-harrow "uzokuququda" umugqa oyisikwele nxazonke (okokusebenza kwepuleti le-harrow, njenge-shaft kunzima), ukuze ishafula lesikwele lizogobeka noma liphuke.
Ukugcinwa Nokunakekelwa Ngemuva Kokuphela Kwesizini
1. Susa yonke inhlabathi kanye nokunye ukungcola kwi-rake
3.Will ahlanze umshini kanye isitoreji, wenze umsebenzi omuhle zokuvikela elangeni.
Olandelayo: I-Heavy Disc Harrow Ye-1BQX Yezolimo